Randeep Hooda oo Alia Bhatt la saftay “Waa inaan iska qabanaa Kangana iyo af xumideeda!” – Filimside.net
Randeep Hooda oo Alia Bhatt la saftay “Waa inaan iska qabanaa Kangana iyo af xumideeda!”
Randeep Hooda waa mid ka mid ah jilaayaasha Bollywood-ka ugu qaab jiliinka wanaagsan sidoo kalena door walbo matali karo waxaa intaas u dheer inuu atoorahan inta badan la shaqeeyo shirkadaha iyo shaqsiyaadka Bollywood-ka ugu caansan badanaa wax muran ah dhexda kama galo ama arimaha xasaasiga ah kama hadlo balse markaan dagaal ayuu diyaar u yahay.
Randeep Hooda ayaa la saftay atirishada Alia Bhatt oo ay filimka Highway isla sameeyeen taasi oo ay xurguf muuqato dhex taalo iyada iyo atirishada Kangana Ranaut wuxuuna dagaalkooda gaaray in baraha bulshada iyo meel walbo la isku adeegsado sidaa labada qoys ee atirishooyinkan kasoo jeedaan ayaa ku lug yeesheen arinkan.
Randeep Hooda wuxuu yiri “Alia Bhatt waa qof igu qaali ah waxaan ku faraxsanahay jilayaasha adiga weerarka kugu hayaan inaysan waxba kuu dhimi karin, waa kuwo qalbiga ka jirin sidoo kalena cuddur gaar ah haayo waxaan ku leeyahay geesiyaad ayaad tahay horey u soco waana ka helay jawaabaha xeeladeesan ee aad bixineysid.”
Randeep Hooda oo toos u abaaray atirishada Kangana Ranaut wuxuu yiri “Waa inaan iska qabanaa Kangana iyo af xumideeda waayo dagaalkeeda ma ahan mid ah hal ama labo qof kula jirto waa qof aan dadka ku xirfada ah guul iyo libin midna u ogoleyn waana arin laga wanaagsan yahay hab dhaqankaas xaasidnimada ka muuqato.”
Waa hubaal in Kangana Ranaut iyo walaasheed Rangoli inay usoo jawaab celin doonaan Randeep Hooda waayo waxaaba ka baxsan waayeen dad iyaga ka gaabsadeen bal ka warama qof weerar toos ah kusoo qaaday sideey ku dhaafi doonaan!
Waxaa Aqrisay 307
16 filim oo bollywood kuwaaso maalmo kaliya ku qaadatay inay gaaraan darajada 200 crore April 18, 2019